Eminyakeni yamuva, ukuthandwa okwandayo ziqala ukuthatha ku horror imidlalo yama-video. Ngasekuqaleni horror uhlobo yayimelelwe ngokuyinhloko imisebenzi enjengokwakha Resident Evil noma Silent Hill, lapho kufanele silwe ezilo ezihlukahlukene ngendlela simo esethusayo. Kodwa manje konke ishintshile kancane, futhi kusukela imidlalo horror-Bhalobhasha babé nje ethukile. Iphuzu eliyinhloko ukuthi ungayeki noma iluphi izikhali, awudingi ukubulala ezilo, izipoki Zombies. Amagoli wakho kungaba ahlukahlukene, kodwa kubo une ukuya ngaphandle kokuphila ngokwesaba njalo, futhi ngokuvamile ngeke nje wesaba acindezele psyche, - uhlamvu yakho kungaba bafa ngokoqobo. Ngokuvamile, manje uhlobo ngokwengqondo horror-Thriller emkhakheni imidlalo yama-computer sekuthandwa kakhulu futhi omunye izibonelo ezicacile iyona Izinhla umdlalo of Fear, okuyinto kudlule futhi uzobe okuxoxwe ngazo kulesi sihloko. Le projekthi kuqhathaniswa fresh futhi ekhangayo kulabo abadlala abathanda ukudonsa imizwa yabo ngenjabulo. In the game of the Izinhla Mesabe ndima akuyona eside, kuba isikhathi esifushane impela, kodwa zinothile ukuze iqedwa kuyokushiya nemizwelo eminingi ebuhlungu.
Kuyini lokho okushiwo yinkulumo Izinhla iphrojekthi Ukwesaba? UMzila indlela sasivumela engavamile, uzithola emzimbeni umdwebi, ngubani ebuyela ekhaya lakhe e indlu scary ebukeka, lapho eqala umsebenzi wobuciko yakhe, futhi uyobe ingamsiza kulo msebenzi. Kanjani? Yonke umdlalo uhlukaniswe izigaba eziyisithupha, ngamunye okuhambelana isigaba esithile izithombe ukudweba. Ngamunye wabo uyogcwala ukusangana protagonist, izinkumbulo zakhe zesikhathi esidlule esibi, kanye usesho izinto ezidingekayo kanye puzzle ngokuxazulula inxuluma, okusikhumbuza Indawo yonke imimoya emibi kusuka kunoma iyiphi ifilimu okukhulu. Lo mhlahlandlela ukuhambisa kukho ngamunye izigaba eziyisithupha Izinhla umdlalo of Fear - indawo ndima kungase kubonakale kunalokho eziyinkimbinkimbi, kodwa ungaqiniseka ukuthi akukho zikhathi esingangeneki kule game.
Ngokushesha inothi kuwufanele ukuthi lesi sihloko imayelana the original umdlalo, hhayi Izinhla project of Fear: Ifa, ukudlula echaza izenzakalo ezalandela babe egameni indodakazi umdwebi sika, azishiye ukwenza i-career kwezobuciko. Ifa has lwendaba ayo futhi acoce indzaba ezahlukene ngokuphelele. Njengoba for lo mdlalo, konke kuqala nge "ngendwangu" - okubizwa ngokuthi isigaba sokuqala. I protagonist ebuyela ekhaya, futhi wena-ke kudingeka ukuthi uqale uliphathe. Iya esitezi sesibili ehhovisi futhi uthathe okhiye etafuleni, nokuthi uzokwazi ukuvula umnyango studio, Esitezi. Uma usuphakathi kuso, uqalaza - uzobona Iyizeli limbozwa ngendwangu. Is izinkontileka yilo Indwangu ukunikeza ukubukeka kwakho ngendwangu elingenalutho ngalo azosebenza. Uma kuphuma workshop, kuyomelwe yonke fun, uhlamvu lakho lizovela ukuhhema, futhi uguqulwe inxuluma, yaphenduka indlu yangempela izinto ezesabekayo. Naphezu kwazo zonke ukuthi kwenzekani endaweni esihlala kuyo obumnandi, ukuthola igumbi umphongolo, uyivule, sebenzisa izinombolo eziye zanyatheliswa kuyi imidwebo. Lokhu kuzovula ndima entsha phakathi busts ezimbili - ungasebenzisa kubo ukuze uthole igumbi isithombe, oluveza uhlelo unodoli okuhlanekezelwe. Uma umi eceleni kwayo, luzowa ngokusebenzisa. Uzodinga uvule izibani futhi ufika ehhovisi, lapho yonke impahla yasendlini Uvele ibheke phansi. Khona-ke udinga ukuza umnyango ekhishini ukuthi ngeke ukuvula. Linda kuze kube yilapho sicisha ukukhanya bese uya isithombe esikhulu, kusukela asuse isiqeshana isikhumba - emva kwesikhashana ushiya ikamelo, futhi uyobe ngokushesha uzithola workshop. Sekuyisikhathi ukusebenzisa isikhumba Iyizeli, waqala ukuba aguqulwe - futhi kuzophela kule esigabeni sokuqala umdlalo. Njengoba ubona lwezendlalelo Ukwesaba: Ifa Ukudlula kuyoba sihluke kakhulu elichazwe lapha. Ngakho okwamanje udinga ukugxila engxenyeni yokuqala umdlalo.
Aphambe Zamatshe Fear uyaqhubeka e esigabeni sesibili, lapha uzodinga ukuphuma studio futhi akhuphukele ikheshi kuya phezulu. Lapho, ungeke ube omningi ukukhetha - wonke amakamelo zivaliwe. Finyelela ekupheleni ephasishi omunye iminyango ikhiyiwe evulekile. Ngenani, thatha ukhiye bese uya kwesinye isitezi saleso ngenhla. Kuleli phansi kuzoba iminyango eminingana avaliwe, omunye engatholwa lesi sihluthulelo ukuze avule. Kube uzokwazi nokugibela izitebhisi futhi phumelani ephasishi. Iya umnyango kude futhi uyivule - esikhundleni uzobona isithombe ukudlula, nomunye umnyango kuzovula ngawe. Woza ngaphakathi, thatha ukhiye ukhanyise amakhandlela, uzobona ukuthi izindonga seziye zaphenduka okwakwenzeka. Njengoba okuningi njengoba kungenzeka ukuthi uyesaba, ungashiyi egumbini kuze odongeni akuthathi injalo evamile. Uthole ukhiye - kusukela ekamelweni, buyela emuva bese uvula umdlali irekhodi. Nalapha futhi, izinkinga ziqala nge kwezindonga, kodwa ngalesi sikhathi awudingi ukulinda bese uvula isibambo gramophone futhi. Uma zonke izinto ixazululwe, uzobona ibhamuza phansi ngegazi. Take it bese uya esitolo lapho udinga ukusisebenzisa ku-canvas. Kakade kulesigaba ungenza njani okwesabisayo iyona Izinhla umdlalo Ukwesaba. ndima uvalo Okugcwele nakakhulu, ngakho qhubeka kuphela uma usukulungele ke.
Yini enye enawulungiselelwa kudlule Zamatshe Abayesabayo? I okufushane umnyuziki ye umdlalo namanje eziningi lezimanga ezahlukene ezenza wena ngovalo. Ngakho, ukuze uqhubeke, udinga ukuba uphume workshop futhi uqhubekele lapho upiyano wayesehambile. Kusuka lapho, uzodinga ukubuyela emuva futhi uqhubekele egumbini kuyiphi awukwazi ukuthola uma kukhona. Ningami on the spot - yisa bese ubuka, bese, kwathiwa uzothatha isikhathi. Yehla ke izitebhisi - etafuleni ngalinye indlela yakho kuzovela ifoni ikhala, okuyinto owamukelayo ayikwazi ukususwa. Ziba lize ngeke wawela ezinyaweni zakho ngokwakho - ke lapho ukuthatha kwihendisethi ukuphendula. Ngenani igumbi ifenisha kugingqika - ngokushesha nje uvula ukukhanya, konke uyowela endaweni. Iya ilifthi wehlele esitezi esingezansi. Okulandelayo uzothola indlela encane komugqa, engesiyo umbala okuningi lwezendlalelo umdlalo Ukwesaba pass. IBhodi, ibhokisi nezinye izinto ngeke ivimbele indlela yakho - balahle okungcono kusukela Pallet. Ngenani intuthuko okuholela bese phansi emiphongolweni. Chofoza izinkinobho upiyano, futhi izinto ziqale undizisa ekamelweni, futhi ukukhanya izovala - zama ukuphuma egumbini elingaphansi, kodwa ngeke isebenze, umnyango ikhiyiwe. Sizoba ukucinga egumbini elimnyama ukuze uthole ibhokisi, ingaphakathi okwakufakwa kulo amathambo. Khona-ke uyoba kakade bakwazi igumbi, phindela workshop futhi usebenzise leli bhokisi elisekhasini ku-canvas.
Kule ngxenye umdlalo uzothola hhayi kuphela ghost ngumkayo, kodwa ziphathiswe indodakazi isipoki. Phakathi ndima uzobe egumbini yezingane, lapho uzodinga sithathe izicathulo izingane. Uzodinga ukuvula omunye iminyango, okuyinto zivaliwe. imizamo eminingana - futhi umnyango ngokungazelelwe wavula. Buka lesitfombe - ngobutjha a madness elesabekayo. Uma sesidlulile, iya ku uze ufike eqophelweni ematfuba kuzophindwa. Vele niguquke futhi uhambe ngenye indlela - ngeke aphinde uzithola nursery lapho udinga ukuthola isihluthulelo carousel ithoyizi futhi ngaphakathi ukusangana elilandelayo ukugibela kuso. Kusukela embhedeni asuse isiqeshana izinwele ofuna kusebenza ngendwangu, uma ubuya ku-studio.
Lokho iza kancane kancane ekupheleni lwezendlalelo umdlalo Ukwesaba pass. Safe kulelizinga kuvula nge ikhodi ekhethekile ukuthi ungakwazi ukuthola uma ingane ukudlala kulo mdlalo, kanye egumbini, engena ezindlini ngezindlu lapho uzobe PUK. Uma ukufinyelela ikamelo elikhulu nge isithombe esikhulu odongeni, aye kuye. Iya isithombe futhi sikubheka njengempahla ezweni futhi uhambe uyahlanya. Ngalesi sikhathi ngeke kalula ngakho bakwazi ukuqeda, ngakho uhlamvu yakho uzolahlekelwa ukwazi. Ukuvuka, iya ekamelweni, wavula umnyango, uzothola khona indzima. Hamba ngaphakathi enyuka imihubhe uze ukwazi ukufika ehhovisi. Kube uzozwa ukukhala kwifoni - it is wezwa kusuka endaweni ethile lezincwadi. Thola ifoni bese uphendula ucingo - ke sibheke isithombe, ku ezilotshiwe amadijithi amathathu ukuthi abaluleke kakhulu ukuze uqedele Izinhla umdlalo Ukwesaba ukudlula. Ikhodi pass? Cha, abadlali abaningi bakholelwa ukuthi ngosizo lezi zibalo, ungakwazi ukuvula Ilokhi, kodwa eqinisweni badinga ushayele ucingo. Lokhu liphindwe izikhathi eziningana - zinyanga entry ukusangana ziqine kangangokuba ifoni uzodinga bangena emanzini Pallet. Uma uphendula ucingo, uqale indlela emuva - ngeke awe phansi. Lapho, uzodinga ukuqoqa esele efonini, umunwe wahlukaniswa, okuyinto ongazisebenzisa Umdwebo ku workshop.
"Umbono ezibucayi" - lokhu esigabeni yokugcina yala mavesi isitshela lokhu game, ngakho yashiya impela kancane. Manje udinga ukuya lapho kukele khona inhliziyo ngabe hang isithombe amabi. Mbukeni - ngokuzumayo zonke imidwebo egumbini liwele phansi. Bephuma emagcekeni ngeke, ngakho udinga uvuke inhliziyo bese ulinda kuze kube livela. Woza bengena ehholo, enyuka endlini, ngifuna ekamelweni ekamelweni elikhanyayo, lapho udinga ukuthatha amabhandeshi. Bangaya endlini lencane, lapho kukhona ubhavu egcwele. Wehlisa ikhanda izikhathi eziningana amanzi kuze ungathola ebhange ngamehlo elele kulo. Bese uya lapho kukele, okuyinto kuyoba owokugcina kwakudingeka ukuba bavakashe ukuqedela Izinhla umdlalo Ukwesaba pass. Ouija ibhodi - ukuthi babona okuningi abadlala okokuqala, efika khona. Kodwa eqinisweni kuvela ukuthi lena ezivamile chess ibhodi, futhi udinga ukuqoqa izibalo okuzovela amakamelo ehlukene, ngokungazelelwe kokuvela angaqondi ukuthi kungani. Uma ukuqoqa wonke izingcezu kudingekile ukuba baqale lokugcina ubuhlanya yamademoni. Uma ungenzi ukusinda, uzothola ngokwakho kwesokudla in the studio. Sebenzisa into yokugcina ukuqedela ukwenza okuhle.
Umdlalo has eziyimpumelelo ezintathu ezahlukene encike yilokho akwenza inqubo edlulayo. Ngamunye wabo ufanelwe udlula umdlalo futhi, ngoba ngamunye kwenza ube nombono omusha emlandweni ezenzeka nomculi. Kulesi phrojekthi, ukunquma isiphetho ngokuthi "omuhle", "omubi" futhi "kokungathathi hlangothi" kunalokho nzima, kodwa, ukuze kube lula, kodwa isazoqhubeka ngakho oluthathwa.
Nale ekupheleni esithombeni ungumkaJerobowamu nendodakazi umculi - iyabona futhi ukuthi izingoma zonke zibe futhi ukuthi ukuphila kwakhe uyakulahlekelwa kuphinde kufane, ngakho ngeke bashise zonke izithombe zakho futhi kanyekanye nabo ngomlilo.
Siphetfo ebonisa ukuthi umculi ayelungisa isithombe inkosikazi yakhe, kodwa ngaso sonke isikhathi isithombe esihle kanjani wabona ukungcola. Ngenxa yalokho, lapho ekugcineni saphuthelwa yiwo umqondo weza ukudweba izithombe infinity.
isiphetho kokungathathi hlangothi
Kulesi self-portrait umdwebi udonsa ukuphela, wanelisa awakwenzayo, futhi hang odongeni, naphezu kweqiniso lokuthi wasebenzisa umzimba izingxenye nowakhe umfazi ukuze isebenze kule "buciko."
Funda indlela yokuzivocavoca njalo ukuze ube umkhuba onempilo womndeni wakho.